तपाईको सुत्ने तरीकाबाट थाहा हुन्छ : कतै डिप्रेशन त हुदैछैन ? [१२ संकेतसहित] « गोर्खाली खबर डटकम
तपाईको सुत्ने तरीकाबाट थाहा हुन्छ : कतै डिप्रेशन त हुदैछैन ? [१२ संकेतसहित]
काठमाडौ । पछिल्लो समय डिप्रेशन विश्वकै जटिल समस्या हो । यो निक्कै ठूलो संख्यामा समस्या छ । सायद हामीले जे देख्छौ, त्यो मात्र सत्य हुँदैन। सायद वास्तविकता पहिले तयार पारेर राखिएको हुन्छ। सायद राम्रो देखिनलाई दिएको मुस्कान झुट हो र भित्रभित्रै उ निराशामा एकदमै राम्ररी डुब्दै गईरहेको छ, निराशाले हामीलाई गाभ्दै लगिरहेको छ। सायद हामीहरु सुरुङको उज्यालो अथवा अन्त्य हेरिरहेका हुँदैनौँ, किनभने त्यो सुरुङले उनीहरुलाई बिरामी र थकित बनाएको हुन्छ।
निराशाको रोग (डिप्रेशन) कहिले पनि स्पष्ट रुपमा देखिँदैन। कहिलेकाँही हामीले चिनेको मान्छे सामान्य देखिन्छन्। तर उनीहरुलाई निराशाको समस्या भइरहेको हुन्छ। तर हामी त्यो समस्या पहिचान गर्नबाट चुक्छौँ किनभने यो त्यस्तो मानिसमा देखिन्छ जुन समान्य देखिन्छन्। निराशाको रोग कालो वा सेतो हुँदैन, त्यस्तै फरक फरक हुन्छ र अस्पष्ट। झट्ट याद नहुने र धेरैजसो थकित र निराशाजनक देखिने हुन्छ। यहाँ केहि संकेतहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ, जसले हामीले चिनेको केहिलाई निराशाको रोग लागेको थाहा पाउँन मद्दत गर्छ।
१, सुताईको तरिका परिवर्तन
२, व्यर्थ महशुस गर्नु,
३, स्वभाव परिवर्तन
४, खाना खाने बानीमा परिवर्तन
६, आत्मविश्वास गुमाउनु
७, नकारात्मक अभिव्यक्ति
८, लगातार चिन्ता
९, थाकेको जस्तो अनुभूति गर्ने
१०, चासो नलाग्ने
११, भावनालाई छोप्नु
१२, जीवन त्यागको प्रवृत्ति
जीवन त्याग र जीवन त्यागको प्रयास। अथवा जीवनलाई बिट मार्ने सोच र विचार आउँनु निराशाको रोगको सबैभन्दा ठूलो लक्षण हुन सक्छ। जसको लागि हामी आफैलाई हेर्न जरुरी छ। मानिससँग एकदमै सावधानीपूण कुरा गर्नु आवश्यक छ। हामी यी सबैबाट बाहिर आउँनुपर्छ। कुनै एउटा चिनेको अथवा अपरिचित सबैलाई माया दिनसक्ने हुनुपर्छ। दयालु हुनुपर्छ। मायाको प्रचार गर्नुपर्छ। यो विश्वलाई यो आवश्यक छ। -एजेन्सी
गहिरो चोटले मात्र हैन यस कारण पनि गुम्नसक्छ स्मरणशक्ति, यसरी सकिन्छ बच्न
तपाईको दिन शुभ-अशुभ दशा,ग्रह कस्तो रहला ?दैनिक राशिफल पढेर जान्नु होस।।